Donald Trump: "Kuuriyada Waqooyi Waxay noqon kartaa mid kamid ah dalalka ugu awoodda badan dunida" - BBC News Somali
Madaxweyne Trump ayaa Guddoomiyeyaasha gobollada Maraykanka u sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay awood dhaqaale oo wayn.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay noqon karto mid kamid ah dalalka "ugu awoodda badan dunida dhanka dhaqaalaha" haddii ay faraha ka qaaddo hubkeeda nuclear-ka.
Qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka, ayaa Mr Trump waxa uu ku sheegay in qarankaasi uu haysto "awood iyo fursado badan oo koritaan dhakso ah uu ku samayn karo fursadahaas oo aanay cid kale haysan"
Hadalkiisa ayaa imaanaya saacado uun kadib markii Xoghayihiisa Arrimaha dibadda Mike Pompeo uu sheegay in Xukuumadda Pyongyang ay wali tahay khatar dhanka nuclear-ka ah.
Mr Trump ayaa 27-28-ka February markii labaad la kulmi doona hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, wuxuuna kulankoodu ka dhici doonaa magaalada Hanoi, ee dalka Vietnam.
" Labadayada dhinacba waxaan filaynaa in aan sii wadno hormarkii aan samaynay shir madaxeedkii koowaad ee aan ku yeelannay Singapore,".
Madaxweynaha ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya asaga iyo Mr Kim uu yahay mid aad iyo aad u wanaagsan.
Waxa uu ku celceliyay in aanu ku dagdagayn cadaadis ku aaddan in Kuuriyada Waqooyi ay hubka nuclear-ka baabi'iso " ma doonayo in aan cidna ku dagdago, ma doonayo inaan cidna jirrabo. Marba haddii aanay tijaabo jirin waanu ku faraxsannahay" ayuu intaas raaciyey.
Kulan madaxeedkii Singapore waxa uu ahaa mid taariikhi ah wuxuuna ahaa kulankii ugu horreeyey ee ay wada fariistaan Madaxweynaha Maraykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, hase ahaatee heshiiska labada nin ay saxiixeen ayaa ahaa mid mugdi badani uu ku jiray oo aan faahfaahin badan laga bixin.
Wax yar uun ayaa ka qabsoomay waxyaabihii ay isla meel dhigeen - oo u gogol xaarayey baabi'inta hubka nuclear ee gacanka peninsula.
Hadalkan ugu dambeeyey ee Madaxweynaha ayaa imaanaya xilli uu u ambabaxayey dalka Vietnam, waxuuna hadalkaasi u muuqday mid hididiilo ay ka muuqatay.
Mr Kim ayaa haatan tareen ugu ambabaxay magaalada Hanoi, waxaan la filayaa in Trump uu u socdaalo Vietnam galinka dambe ee maanta.
Ma cadda jidka uu adeegsan doono Mr Kim, hase ahaatee ilo wareedyo la ahdlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in Mr Kim uu ku hakan doono soohdinta Dong Dang, ee dalka Vietnam, inta uga harsan socdaalkiisa Hanoi-na uu gaari ku tagi doono.